“Side Sohlulwe Kukufa” | Reasonable Service
Indawo: Efese 5:25 – “Nina madoda, bathandeni abafazi benu, njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla, wazinikela ngenxa yalo;”
Namhlanje sizakuxoxa ngokubaluleka komtshato, nokuba ukuba utshatile uhlala emtshatweni ude wohlulwe kukufa.
Kwaye ke, sizakuthetha ngenyaniso ethi, ukuba usindisiwe, uzakuqhubekeka ukuthandwa nguThixo ngonaphakade kanaphakade.
Masikhumbule ivesi yethu – kwabase-Efese 5:25
Umtshato ungumfanekiso wobudlelane bethu noYesu Kristu. – Jonga ivesi 32 ukuya kwivesi 33.
Xa siqonda uthando lukaThixo sizokwazi ukuba nekhaya elomeleleyo, elizele luthando.
Ukuba ndingamthanda inkosikazi yam, nabantwana bam indlela uYesu uyandithanda ngayo, ndizakubanalo ikhaya elizele luthando.
Masijonge umahluko phakathi kothando esithanda ngalo abalingane bethu, nothando uYesu asithanda ngalo.
I. Uthando lwethu lunika imvumelwano yomtshato – Sicinga ngomtshato njengokuba uyimvumelwano –
Umzekelo: Xa ndatshata noThandi, thina sobabini, sathetha isifungo somtshato. Sathi, “ndizakuhlala nawe, ndizakuthanda side sohlulwe kukufa. Ndisitsho ke nje ndinyanisile.”
Kodwa namhlanje, ndicinga isifungo somtshato sitshintshile. Namhlanje isifungo somtshato sithi, “side sohlulwe luqhawulo-mtshato” okanye “side sohlulwe ngesinye isithandwa” okanye “side sohlulwe ngengxabano enkulu.”
A.	imvumelwano – ithetha ukuthi – “ukuba uzenza izinto ezithile, ndizakuzenza izinto ezithile.”
1.	ikhona ngenxa yokuthandabuza – ithi “ndifuna imvumelwano nawe kuba andikuthembi!”
umzekelo: Ndizakusayina imvumelwano noTroy Properties, Imvumelwano le, izakundikhusela kwaye izakumkhusela uTroy. Ukuba andibhathali uzakugcina isakhiwo sakhe, kodwa ukuba ndibhathele kufuneka ndifumana ititle deed yalandawo.
ISIPHELO: Thina abantu singoluhlobo emtshatweni namhlanje. Sithi, “ndizakuthanda, Ndizakugcina, ebumnandini nasebubini, ebutyebini nasebuhlwempini, ekuguleni nasekuphileni, ndize ndikuthande, ndikuxhase, ndikululamele, side sohlulwe yimphazamo yakho, ngobuxoki bakho, ngesithandwa esintsha, njalo, njalo, nditsho nje ke ndinyanisile.”
Sicinga siyangena emvumelelweni xa sitshata. Sicinga sinako ukuphuma emtshatweni ukuba umlingane wethu akenzi amaxanduva akhe, okanye akasikholise kakuhle.
Sicinga xa ikhona ingxaki enkulu, imvumelwano iphelile.
II. Uthando lukaYesu lunika umnqophiso womtshato
Xa umamkela uYesu Kristu ufumana umnqophiso ongonaphakade kuThixo.
A. Umnqophiso – usisithembiso
B.	uYesu wenza umnqophiso noThixo ngosindiso lwethu – uYesu Kristu wenza imisebenzi yomnqophiso kwaye wamkelwa nguBawo.
C.	Yiyolonto iBhayibhile ithi usindiso lusisipho sikaThixo. – Efese 2: 8 – “Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangolo ukholo; nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo; akuphumi misebenzini, hleze kubekho bani uqhayisayo.”
1. Umnqophiso wosindiso lwethu usisipho kuba khange sisebenzele wona – akuphumi misebenzini!!!
D.	kumaHebhere 12:24 – “uMlamli womnqophiso omtsha, uYesu, nakwigazi lokufefa”
uYesu Kristu wabona ingxaki yethu. Wabona ukuba sasizintshaba zikaThixo. Ngoko ke, wasifela, wasenza sibe ngumtshakazi wakhe. Silusapho lukaThixo ngegazi likaYesu Kristu. Sinomnqophiso noThixo ngoYesu Kristu, umlamli nomyeni wethu.
E.	kumaHebhere 10:20 – “Ke kaloku uThixo woxolo, lowo wamvusayo kwabafileyo uMalusi oMkhulu wezimvu, ngegazi lomnqophiso ongunaphakade, iNkosi yethu uYesu,…”
umnqophiso wethu noThixo ngumnqophiso ongunaphakade.
F.	umnqophiso kaThixo wenziwa ngothando olungunaphakade – uYeremiah 31:3 – “…Ndikuthandile ngothando olungunaphakade;”
Nokuba umbi, nokuba ubhityile, nokuba umde okanye umfutshane, ulihlwempu okanye unemali, ukuba usisindisiwe, uzakuqhubekeka ukuthandwa nokukhathalelwa nguYesu Kristu noBawo osemazulwini!!!
uThixo wasisindisa ngomnqophiso wothando, hayi imvumelwano yothando!! Imvumelwano ingaphela, kodwa umnqophiso usisithembiso sikaThixo, asikwazi ukuphela.
Imvumelwano ixhomekeka kwimisebenzi nezenzo yakho. Kodwa umnqophiso uxhomekeka kuthando olungapheliyo lukaThixo.
Asikwazi ukuhlukana nothando lukaThixo, lungunaphakade.
Umnqophiso wosindiso ungunaphakade. Sisindisiwe, sinobomi obungunaphakade –
uYohane 5:24- “Inene, inene ndithi kuni, Lowo ulivayo ilizwi lam,akholwe ngulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade;”
ISIPHELO: uThixo, noNyana, noMoya Oyingcwele, bagqiba ukusindisa abantu ngomnqophiso ongonaphakade, nothando olungunaphakade.
Kufuneka sihambe ngoluhlobo emitshatweni yethu. Kufuneka ndigcine umnqophiso womtshato ndawuqalayo ngalamini ndatshata ngayo.
Kufuneka ndigqibe namhlanje ukuba ndizakuhlala naye nokuba ntoni eyenzeka ebomini bethu.
Ndizakuhlala naye “side sohlulwe kukufa!”